Eedaynta Xoghayaha Guud ee UNWTO waxay ka dhigaysaa garsoore iyo xeerbeegti
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Eedaynta Xoghayaha Guud ee UNWTO waxay ka dhigaysaa garsoore iyo xeerbeegti
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Wararka Spain • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Xubinnimada UNWTO waxaa ka mid ah 159 Dawladaha Xubinta ka ah, 6 Xubnood oo Xiriir la leh iyo in ka badan 500 Xubin oo Xiriir ah oo matalaya qaybaha gaarka loo leeyahay, goobaha waxbarashada, ururada dalxiiska iyo mas'uuliyiinta dalxiiska ee maxalliga ah.
Qofka masuulka ka ah waa Xoghayaha Guud Zurab Pololikashvili. Waa siyaasi reer Georgia ah iyo diblomaasi, xirfad iyo tababar u leh maareynta siyaasadda. Maqaalkani wuxuu muujin doonaa inuusan lahayn wax uu ka cabsado haddii uu go'aansado inuu maamulo hay'addan ku xiran Qaramada Midoobay sida shirkad dambiile ah.
Hay'adaha gaarka ah ee Qaramada Midoobay waa ururo caalami ah oo madaxbannaan oo la shaqeeya Qaramada Midoobay.
Dhammaantood waxaa UN -ku la soo galay heshiisyo wada -xaajood ah.
Qaarkood waxay jireen kahor Dagaalkii Koowaad ee Adduunka. Qaarkood waxay xiriir la lahaayeen League of Nations. Kuwo kale waxaa isla mar lala abuuray UN. Kuwa kale waxaa abuuray UN -ka si loo daboolo baahiyaha soo baxaya waxayna u muuqataa baahiyaha shaqsiyeed ee fadhiya Xoghayaha Guud ee UNWTO.
Dunidu waxay ku jirtaa dhibaato, gaar ahaan, adduunka dalxiiska oo dhan waxaa burburiyay COVID-19. Hoggaaminta wax ku oolka ah ee Ururka Dalxiiska Adduunka, Iskaashiga u dhexeeya UNWTO iyo WTTC waa furaha, laakiin midkoodna ma dhicin tan iyo tan Zurab Pololikasvili wuxuu noqday Xoghayaha Guud Janaayo 1, 2018.
Danbi kaamil ah?
Nasiib darrose, ninka keliya ee u xilsaaran UNWTO, Xoghayaha Guud Zurab Pololikashvili wuxuu ku guuleystay inuu kaarkiisa ciyaaro. Dhibaatada kaliya ayaa ah, isaga ayaa lagu maamulay khiyaano, khiyaano doorasho oo suurtogal ah, haddana wuxuu mas'uul ka yahay inuu dhagaysto oo go'aan ka gaaro cabasho kasta oo isaga ka dhan ah.
Qeybta kaliya ee murugada leh ayaa ah, in inta badan dalalka xubnaha ka ah UNWTO ay leeyihiin waajibaadyo siyaasadeed, oo aysan taaban arrintan. Wadamada kale si fudud uma fahmayaan, in yar baa dan ka leh.
Mr. Zurab Pololikasvili waxay u badan tahay inuusan noqon doonin Xoghayaha Guud Zurab Pololikasvili maanta, haddii doorashada 2018 ay u dhacday si cadaalad ah iyo xeerar.
Waxay noqotaa xeerar cad oo lagu xadgudbay shirkii Golaha Fulinta ee 2017 ee Madrid, iyo mar kale Shirkii Guud ee Chengdu ee 2018, oo oggolaaday Zurab Pololikasvili in marka hore la doorto mar labaadna la xaqiijiyo. Waxaa laga yaabaa inay ahayd dembi kaamil ah.
Falka go’aaminta ayaa dhacay dharaar cad markii Xoghayihii hore Dr. Taleb Rifai uu si ula kac ah u khalday lataliyihiisii ​​sharciga oo markii dambe xayeysiimaha guud ee hadda helay dalacsiin weyn. Zurab Pololikasvili.
3 sano kadib eTurboNews ugu dambayntii waxay heshay falanqayn sharci oo ku saabsan habka waxayna qorshaynaysaa inay daabacdo toddobaadkan.
Wadamadu waxay u diri jireen khidmadaha xubinnimada UNWTO ee Madrid. Waxay u diri jireen hay'ad uu hal qof maamulo dad badanina waxay leeyihiin u orda dantiisa, Zurab Pololikasvili. Ujeeddada kama dambaysta ah ee Zurab Pololikasvili waxay noqon kartaa inuu noqdo Ra'iisul Wasaaraha Georgia.
Zurab Pololikasvili waa qofka kaliya ee iska indha tiraya Hay'adda Ku -xirnaanta Qaramada Midoobay laakiin sidoo kale waa qofka yeelan lahaa go'aanka ugu dambeeya dhammaan arrimaha ama cabashooyinka. Waa garsooraha iyo xeerbeegtida UNWTO. Guddiga Kormeerka Qaramada Midoobay mas'uul kama aha UNWTO.
In kasta oo arrinta khiyaanada ee doorashadii 2017/18 la soo hordhigi karo, haddana ma jiraan wax cawaaqib ah oo ay leeyihiin eedeysanayaasha xilligan.
Natiijada kaliya ayaa noqon doonta in Golaha Guud ee UNWTO sanadkan diido xaqiijinta Zurab Pololikasvili muddo xoghayaha guud oo ka bilaabanaysa 2022.
Ma cadda goorta iyo goobta uu ka dhici doono Shirkaan Guud. GA ee la qorsheeyey Oktoobar ee Morocco wuxuu noqdaa mid sii fogaanaya.
Kani wuxuu ahaan karaa qorshaha gebi ahaanba. Iyada oo ay jiraan dalal badan oo Afrikaan ah, waxaa laga yaabaa inaysan awoodin inay wasiir u diraan Madrid, haddii dhacdada dib loogu celiyo meeshii ay UNWTO xarunteedu ahayd.
Kaliya wax yar ayay ka badan tahay hal bil Golaha Guud ee Morocco, mana jirto wax ilaa hadda la qorsheeyay ama lagu dhawaaqay. Kani wuxuu noqon karaa dhammaan qorshihii hore ee qorsheynta Zurab Pololikasvili.
Maxaa la sameeyaa marka ay arrin ka timaaddo Hay'ad Qaramada Midoobay ah?
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Adeegyada Korjoogteynta Gudaha waa xafiis madaxbannaan oo ka tirsan Xoghaynta Qaramada Midoobay oo waajibaadkiisu yahay inuu “ka caawiyo Xoghayaha Guud gudashada waajibaadkiisa kormeerka gudaha ee ixtiraamka ilaha iyo shaqaalaha Ururka.
Hay'addan si kastaba ha ahaatee awood uma laha hay'ad ku xiran Qaramada Midoobay, oo ay ku jirto Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO)
Waa maxay Hay'adda Ku Xidhan Qaramada Midoobay sida UNWTO?
Nidaamka Qaramada Midoobay wuxuu ka kooban yahay Xoghaynta ugu weyn oo si gooni ah loo maamulo lacagaha iyo barnaamijyada iyo hay'ado khaas ah.
Tusaale ahaan, lacagaha iyo barnaamijyada waxaa ka mid ah Sanduuqa Carruurta ee Qaramada Midoobay iyo Barnaamijka Horumarinta ee Qaramada Midoobay, kuwaas oo leh guddiyo fulineed iyo madax fulineed laakiin ka amar qaata Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay. Taa bedelkeeda, hay'adaha khaaska ah, sida Ururka Cuntada iyo Beeraha, Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) waxay leeyihiin hay'ado maamul iyo madax fulineed oo aan hoos imaan awoodda Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay.
Hay'adaha, oo ah hay'ado caalami ah oo si sharci ah u madaxbannaan oo leh xeerarkooda, xubinimadooda, xubnahooda, iyo ilaha maaliyadeed, ayaa xiriir lala galay Qaramada Midoobay iyada oo loo marayo heshiisyo gorgortan ah.
The Ururka Dalxiiska Adduunka waa hay'adda Qaramada Midoobay ee mas'uul ka ah dhiirrigelinta dalxiiska mas'uul ka ah, waara, oo caalami ahaan la heli karo
Xoghayaha Guud ee UNWTO waa madaxa wakaaladdan madaxa bannaan ee Qaramada Midoobay. Waxa loola jeedo:
Cabasho ku saabsan wax isdaba marin, musuqmaasuq iyo wax isdabamarin Doorashada Xoghayaha UNWTO ee 2017/18 waxaa go'aansan doona eedaysanaha.
Maaraynta iyo eexashada 2021 Xoghayaha Guud ee UNWTO ee 2021 waxaa go'aansan doona eedaysanaha.
Nasiib darro, QM ma eegi doonto cabashada noocaas ah. Qoyska UN -ka, Hay'ado khaas ah ayaa madax -bannaan, mana jirto kala sarrayn. QM lafteedu awood uma laha hay'adaha kale.
Qaybta Kormeerka Wadajirka ah, oo ah hay'ad caadi ah oo ka tirsan Nidaamka Qaramada Midoobay ayaa eegi karta. Aad bay u yar tahay in hay'adani ku lug yeelato, Waxay u wargalinaysaa UNWTO lafteeda, iyo cid kale toona.
La soco wararka soo socda ee ku saabsan eTurboNews arintaan ku saabsan.
Oktoobar 20, 2021 at 13: 30
Mary Tomita wuxuu leeyahay,
Ogosto 30, 2021 markay tahay 05:45
Fadlan iga saar subscribe.